Microsoft Surface Duo: Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iri kuuya Surface Foni
August 10, 2020 by Justin26
Hezvino zvese zvatinoziva nezveSurface Duo kusvika parizvino - Surface Runhare mune ese asi zita.
Microsoft yakave nerunyerekupekushanda pane iyo Surface Foni - kubvira anosvika 2016. Microsoft Surface Duo icho chigadzirwa. Iyo mbiri-skrini, inopetwa Android smartphone-piritsi yakasanganiswa. Saka nekudaro chakasiyana chirevo ku foldable dziripo.
Microsoft yakaratidza mudziyo ku Microsoft's Gumiguru 2019 Kuwedzeredzwa kutanga, asi neyambiro yekuti yaisazotengeswa kweimwe nguva inouya. Zviratidzo zvinoverengeka zviri kunongedzera kuchokwadi zuva reSurface Duo rekuburitsa rinogona kunge richikurumidza.
Chekutanga pane zvese, Microsoft yave Kuwonererwa iyo Android-powered, mbiri-screen mudziyo pa Twitter munguva yezhizha 2020. Uyezve, yakafarira pamitezo yakasiyana siyana inodzora seye US Federal Komisheni Yezvekukurukurirana (FCC), Bazi reJapan rezveMukati mezveMukati uye Kutaurirana uye Bluetooth SIG - kazhinji chiratidzo chekuti kuburitswa kwekutengesa kuri padyo.
Rinoshamisa zuva kusangana kunze ne @panos_panay paMicrosoft Teams uye Surface Duo pane. . . zvakanaka Matimu uye Duo pic.twitter.com/f9tiiQhhly
- Jeff Teper (@jeffteper) August 6, 2020
Saka isu tinoziva kuti chishandiso chiri mukuyedza kuyedza panguva ino. Hatisati tave nemutengo uye izvo zvingango sarudza budiriro yeSurface Duo. Heano akazara maSurface Duo specs uye ruzivo.
Chii chinonzi Surface Duo?
Foldable piritsi iyo inogona kushandiswa sefoni
9.6mm ukobvu kana wapetwa
Pakupera kwaGumiguru Surface yekumisikidza chiitiko, Microsoft Chief Chigadzirwa Officer Panos Panay yakaratidza kuti chishandiso chinogona sei kuita zvese zvaunotarisira kubva kune yemazuva ano smartphone uye piritsi.
Semuenzaniso, unogona kuishandisa kutamba nemaapplication uye kufona, uye inogona kutokwana muhomwe yako. Nekudaro, Panay akati kambani iyi haisi kuona iyo nyowani yeSurface Duo se smartphone kunyangwe ichikwanisa kushandiswa mafoni.
Microsoft inoda kuti iyi ive mhando nyowani yechishandiso, inokwanisa kuita senge zviripo zvemakambani maviri-mu-2 maSoftware parizvino muhomwe. Takanzwa Microsoft ichiti skrini ndeye 1mm yakakora saka yakapetwa pamwe chete ichave 4.8mm.
Kunyange icho chakakora kupfuura mafoni mazhinji ekuremekedza, ichiri chakatsiga. Nekudaro, isu tinogona kuona kumwe kutsoropodza pameso kweakakora bezels kumusoro uye pasi pezviratidzo.
Microsoft inoti iyo Surface Neo neDuo vave "mukukura kwemakore"
Microsoft inonyatso kutya kuisa iri sefoni nekuda kwekunetseka kwaro mumusika uyo. Panguva iyo Surface laptops uye mahwendefa akabudirira, ma Microsoft maapplication mune nharembozha ave asingafadzi.
Microsoft yakundikana kuita budiriro yeayo nharembozha inoshanda sisitimu, uye kutengwa kwayo kweNokia muna 2013 yaive imwe yemakambani makuru akakundikana munhoroondo, zvikaita kuti Microsoft inyore $ 7.6 bhiriyoni. Izvo pakupedzisira yakamisa yayo Windows Nhare yekuedza muna 2017.
Pamusoro Duo software
Android iine ganda, rakavakirwa pana Android 10
Development izvozvi mumba
Surface Duo inomhanyisa Android, asi yakanyanya kuvezwa yeganda reGoogle's mobile yokusebenza system inotinyeuchidza nezvayo Windows 10 X izvo zvichave zviri kuuya kune imwe mbiri-skrini Windows zvishandiso. Inoita seinopa mukana kune yakajairwa Android maapplication (pamwe kuburikidza neGoogle Play Chitoro) uye inokutendera iwe kuisa kana kugamuchira mafoni.
Kuenda kuAndrew ndiko, hongu, kunonakidza. Ndichiri Windows Nharembozha yakakamhina pamwe chete kwehupenyu hwayo hwakawanda kusvikira yaiswa kunze kwenhamo, iyo "Microsoft nyowani" yatora nzira yakatosiyana neyenyota yepasi rose nemafoni emafoni kubvira CEO Satya Nadella achitungamira Microsoft kubva kuna Steve Ballmer muna 2014.
Pane kudaro, yakanangana nekuvandudza maapplication aishanda paIOS uye Android kune rumwe rutivi uye nekubudirira kweSurface mutsara we Windows PC pane imwe.
Mimwe mishumo inokurudzira iyo Surface Duo inowana kukurumidza kugadzirisa kune Android 11 sezvo izvozvi zvave pedyo. Iko hakuna dev kit yevagadziri kuti vagadzirire maapplication avo, asi Microsoft ikozvino yaburitsa emulator kuti iwe ugone kuitarisa. Zviri pachena kuti Android ine yakajairika masheni uye kutonga.
Nekudaro, nepo izvo zveMicrosoft zveapps zvichizoshanda zvisina mushe pamwe nekaviri skrini, zvinoramba zvichionekwa kuti kana vamwe vanogadzira vaizoita avo vemaapuro anoenderana.
Sezviri pachena, Microsoft ikozvino iri kumhanyisa iyo Android kuvandudza mumba mushure mekutanga kondirakiti yebasa kune imwe nzvimbo kuburikidza neyechitatu Movial. Kubva muna Chikunguru 2020, Microsoft ikozvino yawana Movial saka zvave zvichishanda kuunza vazhinji vevashandi vayo mumba.
Zvepamusoro Duo zvinoratidza
Vaviri 5.6-inch 1,800 x 1,350 OLED inoratidza ine 4: 3 chimiro chiyero
Inogona kushanda yakaparadzaniswa kana sere-8.3-inch single screen (albeit ne bezel iri pakati)
Hapana kuratidza kwekunze
Surface pen rutsigiro
Iyo Surface Duo inotarisa yakawanda Microsoft yakakura maviri maviri-skrini Windows 10X-inopiwa Neo pamusoro, asi inonyanya kudhonzwa. Iyo inoratidza maviri 5.6-inch skrini uye inogona kutenderera pane 360-degree hinge kuitira kuti inoshanda sehwendefa 8.3-inch. Chishandiso chinogona kupetana pamwe chete kuchengetedza zviono, kana kuvhura kuitira kuti zviso zviviri zvigone kushandiswa panguva imwe chete. Iwe unogona kunyange kuve neyakavharika nejira rimwe rakatarisana, senge runhare.
Izvo zvinoratidzira zvine 4: 3 chimiro chiyero sedzimwe nzvimbo dzeSait.
Chiratidziro chega chega chinogona kuita maviri maviri akasiyana panguva imwechete. Iwe unogona kana kushandisa imwe yekuratidzira sekhibhodi kana mutambo wekutonga. Ose maviri skrini anozotsigira Surface Pen, saka isu tinofungidzira izvo zvinogona kunge zvine maginiti kubatana nekunze.
MunaFebruary 2020, KufambaCat vakagovana vhidhiyo ye "peek" chimiro cheSurface Duo. Mariri, unogona kunyatsoona kuti mudziyo uchaita sei nezviziviso, zvinowoneka kurudyi kwechiratidziro kuti iwe ugone kubata navo pasina kuvhura zvizere chishandiso. Kune mafoni, iwe unogona zvakare kuvhura iyo Surface Duo zvizere kugamuchira iyo runouya runhare.
- KufambaCat (@h0x0d) February 26, 2020
Pamusoro Duo Hardware
Prototype yaive neQualcomm Snapdragon 855
Yokupedzisira fani inotarisirwa kuvhurwa ne865
6GB yekuyeuka uye 64 kana 256GB kuchengetedza kungangoitika
Iyo Surface Duo prototype ine Qualcomm Snapdragon 855 processor, asi isu tinotenda kuti ichashandisa nyowani Snapdragon 865 mushanduro yekupedzisira. Ramba uchifunga iyo Surface Duo iri mukutarisisa. Mazhinji maficha uye specs zvichiri kuzosimbiswa.
Zvimwe zvekufungidzira kubva pakuburitswa senge 6GB ndangariro uye maviri maviri / 64GB masisitimu ekuchengetedza, asi aya anoramba asina kusimbiswa. Iyo zvakare inonzi ine sizeable 256mAh bhatiri, asi ichazoda kunge yakadaro sezvo ine simba maviri ekuratidzira.
Pachave neSIM-kadhi slot (inonzi 4G, kunyangwe isu tichifunga kuti ichave 5G), tinotenda kuti hakuzove neye SD kadhi muverengi kana kumwe kwakatambanuka kuchengetedza. Zvinonzi kuchave nekuverenga kwemunwe.
Kuchaja uye kubatana kwedata kunenge kuri kuburikidza ne USB-C.
Microsoft Surface Duo Ongororo: Kurota kwevazhinji-tasker
Ndakatenga Microsoft Surface Duo - pfungwa dzangu (ongorora)